Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्ड (DSD) किन SEO एजेन्सीहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो उपकरण हो?
सुरुमा, एसईओ आँधीबेहरीको बखत, कुञ्जी शब्द स्थिति सफलताको मापन गर्ने एक मात्र तरिका थियो ... यसबाहेक, साइट मालिकहरू, जब सम्म कुनै वेबमास्टरहरू थिएनन्, मुख्यतया यो उपाय प्रयोग गर्थे। साथै, तिनीहरूले लगभग परिणामहरू ट्र्याकि tools उपकरणहरू प्रयोग गर्थे उनीहरूलाई तिनीहरूको परिणामहरूमा मार्गदर्शन गर्न।
सामान्यतया बोल्दै, SEOs चाँडै महसुस भयो कि श्रेणीकरण सफलता का एक भरपर्दो सूचक होईन। एक कुञ्जी शब्दको लागि श्रेणीकरणको शीर्षमा हुनुको मतलब केहि पनि छैन। विशेष गरी जब किवर्डको लागि उत्पन्न यातायात कम छ र रूपान्तरणहरू अझै कम छन्।
धेरै कारकहरूले कसरी प्रभाव पार्छ वेबसाइट खोज परिणाममा कसरी देखा पर्दछ। उदाहरण को लागी: वेबसाइट लोड गति, सुरक्षा, डोमेन अनुमति, मेटाडाटा, बाउन्स रेट र ब्याकलिंक्स। एसईओ गर्नु पर्ने कार्यहरूको सूचीमा एक चेकबक्स भन्दा बढि हो, तपाईंसँग निरन्तर आफ्नो वेबसाइट र तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूलाई निर्दिष्ट कुञ्जीशब्दहरूको लागि मोनिटर गर्न आवश्यक हुन्छ तपाईसँग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी छ भनेर निश्चित गर्न।
समयको साथ, यस जागरूकताले SEO लाई अन्य मेट्रिक्सको साथ ट्र्याकि comb संयोजन गर्न प्रेरित गरेको छ। उदाहरण को लागी, जैविक खोज ट्राफिक र रूपान्तरण।
त्यसोभए, यी सबै सहीहरू प्राप्त गर्न तपाईंसँग धेरै प्रभावकारी उपकरणहरू हुनु आवश्यक छ। तर ती सबै बहु साइटहरूका लागि प्रयोग गर्न थकित हुन्छ। त्यसो भए तपाईलाई सबै इन-वन उपकरणको आवश्यकता पर्दछ। यो दिमागमा, एसईओ विशेषज्ञहरु मा Semalt सँगै एक '' पूर्ण वेब एनालिटिक्स र SEO अडिट '' प्लेटफर्म राखेको छ जुन तपाईंको डोमेनमा शून्य लागतमा चलाउन सकिन्छ: समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड (डीएसडी)। यसले तपाईंलाई तपाईंको ग्राहकलाई तपाईंको ब्रान्ड अन्तर्गत उन्नत एनालिटिक्स सेवाहरू प्रदान गर्न अनुमति दिनेछ।
यो आधारभूत मार्गनिर्देशनले तपाईका लागि अत्यन्तै प्रभावकारी SEO उपकरणको सबै विवरणहरू वर्णन गर्दछ। र केहि बिन्दुहरू जसले यसलाई विशेष बनाउँदछ।
किन यो DSD सन्दर्भ उपकरण प्रयोग गर्ने?
DSD SEO उपकरण परेशानी कुञ्जी शब्द अनुसन्धान र डेटा विश्लेषण को बाहिर परेशानी लिन्छ। यस उपकरणको साथ तपाईले देख्न सक्नु हुन्छ के काम गरिरहेको छ र तपाईको रणनीतिको कुन अंशहरू सुधार गर्न सकिन्छ। यो उत्तम DSD SEO उपकरण पनि तपाइँको प्रतिस्पर्धी फिट र उत्तम अवसर मा रिपोर्ट प्रदान गर्दछ। यसका साथै यसले देश, क्षेत्र वा भाषाबाट खोजी कार्य मापन गर्न तपाईंलाई अनुमति दिन्छ।
प्रदर्शन मूल्यांकन गर्नुहोस्
यदि तपाइँ बहु वेबसाइटहरू प्रबन्ध गर्नुहुन्छ भने, समर्पित SEO ड्यासबोर्डले उडानमा प्रत्येक साइटको प्रदर्शन मूल्या evalu्कन गर्न मद्दत गर्दछ। धेरै वेबसाइटहरू भएका धेरै उद्यमीहरूले स्प्रेडसिटहरूमा ठूलो मात्रामा डाटा राख्दछन् र यसलाई मैन्युअल्ली विश्लेषण गर्दछ। तर यो चाँडै नै भारी हुन्छ र जोखिम बढाउँदछ कि रिपोर्टहरू गलत हुनेछन्। भाग्यवस, तपाईं समर्पित SEO ड्यासबोर्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ कामको घण्टा बचत गर्न र एकल क्लिकको साथ सहि रिपोर्टहरू सिर्जना गर्न।
किन हाम्रो उपकरण बजार मा सबै भन्दा राम्रो छ
समर्पित SEO ड्यासबोर्ड सबैभन्दा सिफारिश गरिएको अनलाइन SEO उपकरणहरू मध्ये एक हो। SEO विशेषज्ञहरू कहिले पनि DSD को अडिटिंग सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन्, जस्तो कि सबै भन्दा राम्रो SEO विश्लेषण उपकरण।
उपकरणले तपाइँको वेबसाइटको कुन भागहरू तपाइँको खोज इञ्जिन स्तर निर्धारण स्तर सुधार गर्न आवश्यक छ देखाउँदछ। प्रतिस्पर्धी विश्लेषण को मामला मा, तपाईं सम्भवत DSD आफ्नो प्रतियोगी ब्याकलिंक्स पहिचान गर्न को लागी प्रयोग गर्न को लागी तपाइँको आफ्नै ब्रान्ड को लागी एक शुरुवात बिन्दु को रूप मा प्रयोग गर्दछ।
तपाईले यो DSD SEO उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कोठासँग सब भन्दा बढि सामग्री भेट्टाउन, तपाईको वेबसाइटमा टुटेका लिंकहरू जाँच गर्न र फिक्स गर्न, र तपाइँको शीर्ष प्रदर्शन पृष्ठहरूको स्न्यापशट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ (ताकि तपाइँले हेर्न सक्नुहुनेछ कि कुन जानकारी आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ)।
विज्ञहरु लाई यो तथ्य मन पर्छ कि तिनीहरु लाई तपाईको रैंकिंग मा सजिलै मापन गर्न को लागी, साथै स्पट परिवर्तन र नयाँ श्रेणीकरण अवसरहरू। यस एसईओ उपकरणको सबैभन्दा लोकप्रिय सुविधाहरू मध्ये एक पूर्ण साइट विश्लेषण हो, जसले तपाईंको साइटलाई प्रतिस्पर्धामा तुलना गर्न सजिलो बनाउँदछ।
एक SEO किवर्ड उपकरणको रूपमा समर्पित SEO ड्यासबोर्ड
यो एसईओ अभियान को सफलता को निगरानी को लागी आवश्यक सबै वेब एनालिटिक्स र अडिटिंग उपकरण प्रदान गर्दछ। समर्पित एसईओ ड्यासबोर्डको साथ, तपाईंको ग्राहकहरूले सजिलैसँग सबै महत्त्वपूर्ण मेट्रिक्स ट्र्याक गर्नेछ र अवस्थित अप्टिमाइजेसन त्रुटिहरू प्रकट गर्दछ।
यदि तपाईंलाई खोजी डेटा, तपाईंको साइटको ट्राफिक वा तपाईंको प्रतिस्पर्धीलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न मद्दतको लागि विश्लेषणात्मक रिपोर्टहरू आवश्यक छ भने, तपाईं केवल हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ वा हाम्रो विज्ञहरूको नि: शुल्क सहयोगको साथ १ do मिनेटमा आफैमा यसलाई आफै गर्न सक्नुहुनेछ।
विज्ञहरूका अनुसार समर्पित SEO ड्यासबोर्ड बजारमा सब भन्दा राम्रो SEO मार्केटिंग उपकरण मध्ये एक हो। योसँग असंख्य उपयोगी सुविधाहरू छन्, जसले तपाईंलाई लाखौं सबैभन्दा लोकप्रिय वेबसाइटहरूको रैंकिंग हेर्न अनुमति दिन्छ।
यो पनि एक SEO कुञ्जी शब्द उपकरण को रूप मा काम गर्दछ लक्षित गर्न को लागी राम्रो खोजशब्दहरु को लागी, साइटहरु तुलना गर्न को लागी र तपाइँको रैंकिंग ट्र्याक गर्न सुविधाहरु संग।
SEO ड्यासबोर्ड: के समावेश छ?
हाम्रो समर्पित एसईओ ड्यासबोर्डमा समावेश सुविधाहरू यहाँ छन्:
शीर्ष कुञ्जी शब्दहरू
यो खण्डले सबै कुञ्जीशब्दहरू प्रदर्शन गर्दछ जसका लागि वेबसाइट गुगलको कार्बनिक खोज परिणाममा क्रमबद्ध हुन्छ, साथै श्रेणीकृत पृष्ठहरू र उनीहरूको SERP स्थान विशेष कुञ्जी शब्दका लागि।
वास्तवमा, सहि किवर्डहरू छनौट गर्नु SEO र SEM गतिविधिको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण तत्वहरू मध्ये एक हो। यी वाक्यांशहरू हुन् जुन प्राय: निर्धारण गर्दछ कि हाम्रो वेबसाइटले गुगलमा यसको दृश्यता बढाउनेछ र यसले सहि दर्शकहरूमा पुग्नेछ कि गर्दैन।
सही कुञ्जी शब्दहरू छनौट गर्ने प्रक्रिया चयन गरिएको वेबसाइटको गहन विश्लेषणको साथ सुरु हुनुपर्छ। तपाई आफैले आफूलाई डीएसडीसँग परिचित गर्नुपर्दछ, सबैभन्दा नयाँ Semalt उत्पाद वेबसाईटमा समावेश छ, त्यस पक्षलाई विशेष ध्यान दिँदै अन्यबाट फरक पार्दछ।
DSD का साथ तपाईले खोजशब्दहरूको विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने थाहा पाउनुहुनेछ खोजी परिणामहरूमा उच्च पदमा पुग्नको लागि!
यो खण्डले वेबसाईटहरूमा जैविक ट्राफिकको सब भन्दा बढि शेयर उत्पादन गर्ने पृष्ठहरू प्रकट गर्दछ।
तपाइँको स्रोत र तपाइँको प्रतिस्पर्धी साइटहरु को एक विस्तृत विश्लेषण तपाइँ लाई शीर्ष खोज परिणाम मा प्राप्त र सम्भावित ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्दछ। बजार नेताहरू SERP प्रासंगिकताको आधारमा उपयोगी आविष्कारहरू मापन गर्न गाह्रो हुन्छ। प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान एक प्रभावी रणनीति को दिशा मा एक कदम हो।
यहाँ तपाईले गुगल टॉप १०० मा राखिएको वेबसाइटहरू भेट्टाउनुहुनेछ यस्तै कुञ्जी शब्दहरूको लागि जसको लागि विश्लेषण गरिएको वेबसाइट सूची हुन्छ।
वेब पृष्ठ विश्लेषक
यस उपकरणले वेबसाइट प्रदर्शन, मोबाइल अनुकूलन, सामाजिक मिडिया उपस्थिति, on-पृष्ठ SEO र अन्य महत्वपूर्ण अप्टिमाइजेसन कारकहरूको विश्लेषण गर्दछ।
नक्कलको साँच्चिकै रैंकिंगसँग के गर्नुपर्दछ? Google प्रयोगकर्ताहरूलाई सामग्री देखाउन चाहन्छ जुन मूल्यवान छ र तिनीहरूलाई मूल्यमा ल्याउँछ। यसले "डुप्लिकेट सामग्री" लाई घृणा गर्दछ किनकि गुगललाई, यसको मतलब अप्रमाणिक सामग्री देखाउँदै - यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले चाहेको सामग्री प्राप्त गर्न चाहन्छ - यो प्रासंगिक हुनेछ, यसले मूल्य थप गर्दछ र उनीहरूले खोजिरहेको जानकारी प्राप्त गर्दछ।
यो उपकरण गुगलले तपाइँको वेब पृष्ठलाई गैर-साहित्य चोरी स्रोत हो वा अद्वितीय होइन भनेर तपाइँलाई जान्न अनुमति दिन्छ।
गुगलमा वेबसाईटको स्थितिलाई असर गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू मध्ये एक यसको गति हो। वेबसाइट कसरी छिटो छ भनेर म कसरी जाँच गर्न सक्छु? यसको लागि मैले कुन उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्छ? DSD तपाइँलाई निर्धारित गर्न को लागी तपाइँको वेबसाइट को लोडिंग को समय Google को आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न अनुमति दिन्छ।
वास्तवमा, पृष्ठ गति हाल गुगलको स्तर निर्धारण कारक मध्ये एक हो। द्रुत लोडिंग वेबसाइटहरूले खोज इञ्जिनहरूमा राम्रो स्थानहरू प्राप्त गर्दछ, तर यसले प्रयोगकर्ताको अनुभवमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। प्रयोगकर्ताको पहिलो प्रभाव एकदम महत्त्वपूर्ण छ - यदि पृष्ठको साथ पहिलो सम्पर्कमा यो स्थिर हुन्छ वा धेरै बिस्तारै लोड हुन्छ भने हामी यसलाई टाढासँग सम्पर्क गर्दछौं। विशेष गरी अनलाइन स्टोरहरूमा यो महत्त्वपूर्ण छ किनभने ग्राहकहरू निःशुल्क स्टोरहरूमा किन्न चाहँदैनन् - यदि पसल किनमेलको क्रममा क्र्यास हुन्छ भने के हुन्छ?
वेबसाइटको गति पनि तथाकथित बाउन्स दर मा एक महत्वपूर्ण प्रभाव छ। यो एक प्यारामिटर हो कि एकल उपपृष्ठ प्रविष्ट गरेपछि पृष्ठ छोड्ने व्यक्तिको संख्या निर्धारण गर्दछ। यदि एक साइट ढिलो छ भने, धेरै व्यक्ति सामग्री लोड हुन को लागी पर्खाइ बिना यसलाई बन्द गर्छन्।
यहाँ, प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो नयाँ सेतो-लेबल रिपोर्ट र टेम्पलेटहरू सिर्जना गर्न सक्दछन्, साथै साथै वितरण कार्यक्रम सेट अप गर्न सक्दछन्।
समर्पित SEO ड्यासबोर्ड वेब एनालिटिक्स उपकरणको साथ तपाईंको वेबसाइट अन्वेषण र सुधार गर्नुहोस्। हाम्रो जस्तो नि: शुल्क र सजिलै प्रयोग गर्न सकिने वेबसाइट विश्लेषण उपकरण तपाईंको साइटका त्रुटिहरू सुल्झाउने र धेरै बढी ट्राफिक पाउनको लागि उत्तम शर्त हो। समस्या समाधान गर्न जस्तै टुटेको लिंक फिक्स गर्न को लागी हाम्रो DSD उपकरण को लागी सजिलो छ। यसको साथ, तपाईं चाँडै नै समस्याहरू पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ जुन अन्यथा तपाईंको साइटको दर्जाको मूल कारण हो।
अर्को शब्दहरु मा, तपाइँ तपाइँको साइट को सुधार गर्न को बारे मा सचेत हुनुहुन्छ। यद्यपि त्यहाँ त्यस्तो उत्तम चीज छैन जुन पूर्ण रूपमा उत्तम वेब सामग्रीले सुधार गर्न सकिदैन। यो एसईओ वेबसाइट विश्लेषण उपकरण यूआरएल बाट नै, तपाइँ यी पक्षहरू जान्न मद्दत गर्न सुसज्जित छ। साथै, तपाइँ कसरी सिक्न सक्नुहुन्छ प्रतिस्पर्धाको बिरूद्ध तपाइँको साइटको स्तर निर्धारण। यसका अतिरिक्त तपाईले यो उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको साइटमा औंल्याउने ब्याकलिंक्सको संख्या र महत्त्व जान्न।
साथै, जब तपाइँ एक साइट विश्लेषण चलाउनुहुन्छ, तपाइँ बिभिन्न यूआरएलहरूको विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू किन तपाइँ भन्दा माथिल्लो जस्तो देखिन्छ भनेर फेला पार्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो समर्पित SEO ड्यासबोर्ड वेबसाइट विश्लेषक विश्वसनीय छ र तपाइँको एसईओ को हर समय शीर्ष पायदान हुन मद्दत गर्दछ। हाम्रो अनलाइन वेब उपकरणको साथ तपाइँको वेबसाइट समीक्षा गरेर, तपाइँ तपाइँको वेबसाइट मा परिवर्तन परिवर्तन को थाहा छ। केही सेकेन्डमा, तपाईं इन्टरनेटको वेबसाइटमा हेर्न र तपाईंको वेबसाइटले विभिन्न यूआरएल अडिट सेटिंग्स प्रयोग गरेर प्रदर्शन गरिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै ब्लगरहरू, एसईओ एजेन्सीहरू, SEO फ्रिल्यान्सरहरू, Semalt पुनर्विक्रेताहरू र वेबमास्टरहरू यस उपकरणको साथ प्रभावित छन्।